KaOS 2019.07 ikozvino yave kuwanikwa, ine Plasma 5.16.2 uye Linux 5.1.15 | Linux Vakapindwa muropa
Nguva zhinji, patinoburitsa chinyorwa chinotaura nezvechirongwa chekushandisa isu tinoti iyo system yakavakirwa pane imwe system, sezvo Ubuntu yakavakirwa paDebian uye, semuenzaniso, Linux Mint yakavakirwa paUbuntu. Chinyanyozivikanwa nhasi ndechekuti yega nyowani yekushandisa sisitimu yakavakirwa pane vamwe, asi hazvisi izvo zvakagadziriswa nevakagadziri veiyi huru system yeiyi posvo, sisitimu inoshanda yakatanga kubva pakutanga KaOS 2019.07 Ikozvino yave kuwanikwa.
KaOS yakazvarwa muna Zvita 2013, saka haisati yave nemakore mashanu ekuberekwa. Pakutanga yainzi KdeOS, asi yakachinja zita rayo kuva KaOS kuitira kuti isavhiringidza vashandisi. Vagadziri vayo vanovavarira kugadzira yazvino yekushandisa sisitimu yakanangana nePlasma, Qt uye 64bits, pamwe nekusanganisa akanakisa ekushandisa uye maturusi. Iyo yaJuly 2019 vhezheni yeiyi inoshanda system inosvika ne KDE Kunyorera 19.04.2.
1 KaOS: kujairana, asi zvakasiyana
2 Chii Chitsva muKaOS 2019.07
KaOS: kujairana, asi zvakasiyana
Kana isu tatanga KaOS, chimwe chinhu chakakodzera kuita muGNOME Mabhokisi kutanga (nekuti chinotaridzika zvikuru pasina kuisa chero chinhu chinowedzera) chinobata ziso rako… zvese. Kutanga, uye izvi zvinogona kunge zvine chekuita nezvekuti ivo vane chinangwa chekuvhura yakatosiyana sisitimu yekushandisa, iyo Plasma 'pasi' pani / bhar iri kurudyi. Ndeapi masisitimu anoshanda awakaona iwo anayo ipapo? Mubhawa iri, chinova chinhu chekutanga chaunoona uye chinokwezva kutarisisa, tinoona akawanda maekoni kupfuura atinoona muKubuntu kana KDE Neon, semuenzaniso. Kune kutanga, yakagadzirirwa ne "icon chete" sarudzo maneja sarudzo uye yekutanga application mu "application menyu". Ini ndinotaura zvese izvi nekuti, semushandisi weKubuntu, zvinondishamisa.
Kune zvese zvimwe zvinhu, KaOS inoshandisa dingindira rePlasma, asi kana tangojaira, maapplication achashanda zvakafanana nekuti iwo maKDE maficha, senge Dolphin, Konsole kana Spectacle. Ah, taura zvakare kuti iwe unoshandisa iyo KDE Dolphin webhu browser. Uye chimwezve chinhu: KaOS shandisa pacman se package package system.
Chii Chitsva muKaOS 2019.07
Plasma 19.04.2, inowanikwa kubva muna Chikumi 25.
KDE Kunyorera 19.04.2.
KDE Mapurani 5.59.
FreeOffice 6.2. Kusvika parizvino ndaishandisa Calligra.
Network Maneja 1.18.1.
Iyo module yekugamuchira inoratidza zvikamu zvemitauro zvinotsanangurwa nenzvimbo.
Chikamu chekuparadzanisa chinopa mamwe macheki ekugadzirisa zvikamu zvekuparadzanisa.
Kune avo vanofarira, unogona ikozvino kurodha KaOS 2019.07 kubva Iyi link.
KaOS inopemberera gore rayo rechitanhatu uye kuvhurwa kweKaOS 2019.04
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » KaOS 2019.07 ikozvino yave kuwanikwa, ine Plasma 5.16.2 uye Linux 5.1.15